बस र ट्रक एकापसमा ठोक्किदा एकको मृत्यु, दुई घाइते | नमोबुद्ध न्युज
ब्रेकिङ समाचारबस र ट्रक एकापसमा ठोक्किदा एकको मृत्यु, दुई घाइते
काठमाडौ– चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नं. ५ कालिका पेट्रोलपम्प नजिक गए राति बस र ट्रक एकापसमा ठोक्किंदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा खोटाङका ४५ वर्षीय चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यबहादुर थापाका अनुसार काठमाडौँबाट काँकडभिट्टातर्फ गइरहेको ना.७ ख. २१११ नं.को बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको ना.६ ख. ४२८१ नं.को ट्रक एकापसमा ठक्कर खाएको थियो । ठक्करबाट घाइते भएका बसका चालक श्रेष्ठको उपचारका लागि अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमा नै निधन भएको हो ।